googlelavidavitrakokoa [wiki ifg]
Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/f/f45697e2172350f1bf8f9e77da09cbec.xhtml failed
Google lavidavitra kokoa
10/06/2005 Mpanoratra : Heriniaina M.
Google no fitavoana fikarohana pejy amin’ny Internet be mpampiasa indrindra, 47,3% (1) amin’ny karoka ataon’ny moteurs de recherche tamin’ny volana martsa 2005. Alaivo sary an-tsaina kely anie ny tanjany : 8 miliara ny pejy voarakitra ao amin’ny Google tamin’ny volana febroary 2005 ary tsy mitsahatra mitombo... isan’andro, 112 tapitrisa ny karoka isan’andro.
Ilay interface tsotra dia tsotra no tena nampalaza an’i Google ary koa ny hafainganan’ny fahitany ireo pejy mifanaraka amin’izay tadiavinao. Na izany aza anefa dia mety mbola tsy ho hitanao izay ilainao raha tsy mampiasa teknika matsilo kokoa noho ireo fototra. Efa maro be ireo pejy manazava sy manoro ny amin’ireo teknika ireo (2).
Ity lahatsoratra ity noho izany dia entina hanintona ny sainao fotsiny ihany ny amin’ny zavatra maro be azonao hanatsarana ny fampiasanao ity fitaovana fototra amin’ny Internet ity.
site: hamerana ny fikarohana ho amin’ny site iray
Oh. site:www.bianco.mg declaration +de patrimoine
filetype: raha misy fichier manokana tiana ho hita (pdf, doc, sxw, sxc, txt, ...)
Oh. filetype:pdf knoppix guide
link: mikaroka ireo site manana ilay vahan-teny anatin’ny rohy (liens)
cache: mamoaka ireo pejy voatahiry ao amin’ny Google mitondra ilay vahan-teny
ao koa ny intitle: allintitle inurl: allinurl: etc.
Afaka miaraka ny teknika maromaro, ohatra : windows ‘Openoffice requirements’
Misy lisitr’ireo operateurs ireo ao amin’ny http://www.google.com/help/operators.html
Fitadiavana hira (Mp3, wma, ogg, sns.)
Maro ireo site tsy manakatona ny fichier ‘index’ ka raha hainao ny mitady izany amin’ny Google dia mety hahita izay mahasoa anao.
Ny dikan’ireo dia tsotra ihany, asaina mitady izay adiresy (inurl) mitondra anaran-takila ‘index of’ ny karazan-kira tadiavina eto Mp3 dia nampiana koa ny anaran’ny tarika, mety koa ho ny lohan-tenin’ny hira. Ilay faharoa indray miampy kely, mitondra anaran-takila ‘index of’ na ‘Last modified’ ary ny tadiavina ao dia izay fichier Mp3, afaka soloinao io : wav, ogg, ets.
Fitadiavana boky elektronika (e-book)
Ny firafitra ankapobeny dia toy ilay tery ambony, ny singa antsoina pipe (en), tube (fr) ataontsika hoe fantsona dia milaza amin’ilay milina hoe vahanteny voalohany NA ilay faharoa. Afaka hitarina hitady boki-na mpanoratra na edisiona iray dia lasa toy izao indray :
Karoky ny pirates mampiasa google
Ireo karoka be mpampiasa indrindra :
“# -FrontPage-” ext:pwd inurl:(service | authors | administrators | users) “# -FrontPage-” inurl:service.pwd Rohy
Nosintonina tao amin’ny "I'm Johnny. I hack stuff"
Hitantsika amin’izao ny mety ho complexite-n’ireo karoka azo atao amin’ny Google izay toa tsotra ihany fisehoany ivelany.
Santionany fohy dia fohy ihany io fampiasana Google io nefa mety hampiena be dia be ny fotoana lany amin’ny fikarohan-javatra ao amin’ny internet, vola ny fotoana indrindra raha internet. Nefa raha kinga amin’ny karoka dia mety hihena 90% ny fotoana lany amin’ny fikarohana.
Aza adino koa anefa ireo forum marobe fa mety hahitanao zavatra tsy ampoizina, ao koa ireo lahatsoratra maro amin’ny site-na orinasa, na gazety. Aza adino koa ireo pejy (rohy) ‘Ressources’, ‘publications’, ‘liens’, ‘favoris’.
Efa lasa lavitra amin’ity internet ity ny firenena maro ary misy koa olona olona mitovy centres d’interets aminao ary efa nahita sy nahavita be, afaka ahitana zava-mahaliana daholo izany rehetra izany ka dia mahaiza mitady.
Ankoatran’i Google, ireto ireo moteurs de recherche lehibe eto amin’ny Internet:
Source : www.1cog.com
Raha handeha lavidavitra kokoa...
Fonctions etendues de Google
Recherche Google, principe de base
Astuces et fonctions de recherche Google
(Loharanon-dahatsoratra : 'The Google Hackers Guide')
Aza misalasala maneho hevitra ao amin’ny Forum
googlelavidavitrakokoa.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43